Jiri obi ụtọ na-eme nke ọma maka ihe ịga nke ọma nke usoro ịmechi mgbidi mkpuchi (Shanghai)!
Oge: 2013-11-22 Hits: 19
Ngosiputa ihe eji eme ihe nchoputa nke ihe nleba anya na ihe nlere bu ihe nlere anya na ihe nlere anya nke ulo elu nke ulo a bu ndi oria ime obodo East China, ulo oru nyocha ihe omumu ya na ulo oru nyocha., Ltd. ọnụ ụzọ ụlọ mkpuchi na ndị ọkachamara na windo na akwụkwọ akụkọ nkà ụlọ ahụ mechiri nke ọma na November 16, 2013 na ụlọ nzukọ sayensị Shanghai.
Nzuko a na-achikota ndi okacha nke ogbi, ndi na-ese ulo na ndi n’ere ulo na ndi n’uwa ime ka ha kparita maka omimi mmepe ohuru nke ogha-iru ulo eji eji eme ogwugwu. Nzukọ ogbako nke ihe karịrị mmadụ 500 bịara bụrụ nzukọ ọgbakọ pụrụ iche kachasị na China. Dịka onye ọrụ nhazi, ụlọ ọrụ anyị arụpụtala ezigbo ihe na mgbasa ozi mmekọrịta na mmụta.
N'oge nnọkọ ahụ, ndị sonyere tụlere echiche mgbidi mgbidi ahụ banyere iwulite mmepe site n'echiche ọhụrụ, echiche dị iche iche na mkparịta ụka na mpaghara, na-enyocha ọnọdụ dị ugbu a na mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ nke ákwà mgbochi ahụ, ma nye nkọwa zuru ezu site na teknụzụ sitere na ngwa ọrụ akọwapụtara n'ihe gbasara injinịa. Isi okwu gunyere: "Conceptual Design of Architectural Clock Wall", "Development na Mbido nke Shanghai Architecture", "Nhazi na Mwube nke Mpụga nke Mpụga Mgbasa nke Ndị Ọhụrụ Ndị Ọhụrụ", "Akwụkwọ na-abụghị ụlọ kwụ ọtọ. na Mwube nke Mgbakwunye Mmebe "," Ngwa nke Rhino na BIM Software na Mgbakwunye Shape ", wdg. N’ ụlọ na-abụghị akara ahịrị, nkwupụta okwu nkuzi na teknụzụ dijitalụ kwuru ọrụ ụlọ ọrụ anyị ọtụtụ oge ma nye nkwuputa dị elu. Prọfesọ Long Wenzhi nke China Owuwu Mkpo Mwuba na Onyinye na windo, na-ewere Tianjin Port Project nke ụlọ ọrụ anyị dị ka ihe atụ, gosipụtara nke ọma na ntinye nke ihe owuwu ihe owuwu nke GRC.
Chen Wei, onye isi ọrụ ụlọ ọrụ anyị, bụkwa onye ọbịa ọbịa ma kwuo okwu na "GRC anụ ahụ na-eme ka usoro ụlọ ahụ maa mma". Okwu a adọtala ọtụtụ ndị nọ na ụlọ ọrụ ahụ ị toa ntị na GRC na belinda.
Nkwupụta ahụ mere ka ọ pụta ìhè na GRC, dịka ihe nrụpụta dị elu nke ọtụtụ ihe eji achọ ihe eji achọ inyoganic ákwà mgbochi na narị afọ nke iri abụọ na otu, aghọọla anụ anụ nwere njiri mara nke oge n'ihi ụgbụ shei ya, njiri mara nnukwu, nkwonkwo na-agbanwe agbanwe, arkpụzi aka ike na ụzọ aka nka nke afọ 21, yana teknụzụ ya na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ yana nke ala.
N'oge nnọkọ ahụ, ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ, ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ na ndị na-ahụ maka mgbidi ákwà mgbochi gosipụtara nnukwu mmasị na ihe Belinda na GRC. Nke a kwekọkwara na mkpa ụlọ ọrụ na-esonye na ọrụ a: ọ gwala belida ka ọ gaa n'ihu na-akwalite ihe ọhụrụ na teknụzụ ọhụrụ, wuo usoro ịchekwa ume na obere mgbidi ogwe mkpuchi nke ala, mepụta gburugburu ebe dị elu, ma ghọọ ụwa 'E-GRC' na-eweta ọrụ sistemụ ndozi ihe ọkụkụ nke ụwa.
Ọ ga-amasị m ikele ndị nhazi maka inye belinda ikpo okwu iji gosipụta ngwaahịa na teknụzụ ọhụrụ. Ekwenyere m na belinda ga-amata ọtụtụ ndị si n'akụkụ niile nke ndụ, na-enye aka na usoro ihe owuwu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, na-eke gburugburu ebe mara mma, na-eduga ụlọ ọrụ GRC n'ịdị elu ọhụrụ, ma na-eme belinda ka ọ bụrụ kpakpando ọhụrụ na-adọrọ adọrọ na ụlọ ọrụ mgbochi ahụ. !